Vaovao - Inona no tokony hojerena rehefa mametraka ny lasantsy lohan'ny varingarina
Inona no tokony hojerena rehefa mametraka ny gasket lohan'ny varingarina
1. Tsy azo tsindriana
Ny fingotra synthetic dia afaka manova ny endriny toy ny tsiranoka. Mazava ho azy, tsy afaka mikoriana. Rehefa nanjavona ny hery manindry izay nanindry ny fiovan'ny toetrany dia afaka miverina amin'ny endriny tany am-boalohany izy (izany hoe ny volan'ny gasket dia tsy miova mandritra ny fizotran'ny famatrarana. Fiovana, aseho amin'ny haben'ny fiovan'ny tsindry).
Tokony hanana hery ampy hanoherana ny hery mametaka izay mahatonga azy hiditra amin'ny fanjakana voaisy tombo-kase ary mahazaka ny mpanelanelana amin'ny tsindry avo lenta (izany hoe ny toetra ara-batana amin'ny gasket fingotra toy ny tanjaka mihombo sy ny tanjaka).
Amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny raikipohy, dia tsy vitan'ny hoe hahatratra tanjaka ampy hampiasana azy io, fa hanana plastika ampy koa, mba hahafahana mifamatotra akaiky amin'ny metaly eo ambany tsindry mety amin'izany, ka mamokatra fiasa famehezana (endrika gasket sy takelaka famehezana ny endrika tsy miova ny lalan-drivotra).
4. fanoherana fidirana
Ny firafitry ny tambanjotra polymer telo-dimensional an'ny rubber vita amin'ny synthetic dia afaka manohitra ny fidiran'ny rano misy fananana simika samihafa (fanoherana ny media).
5. fanoherana ny hafanana
Ny fehin-kibo ao anaty akora polymer dia misy fatiantoka, izany hoe hiteraka tsy fahita afa-tsy amin'ny elanelam-potoana somary tery ihany raha ny hafanan'ny hafanana. Noho izany dia zava-dehibe tokoa ny fisafidianana tsara ny raikipohy araka ny mari-pana ilaina amin'ny fampiasana azy. .
6. Fiainana fanompoana
Fitaovana syntetika vaovao maro no manana ny mampiavaka ny androm-piainan'ny fanompoana maharitra raha oharina amin'ireo akora taloha. Izany dia vokatry ny fampiasana additives vaovao hanitatra bebe kokoa ny androm-piainan'ny serivisy. Amin'io lafiny io, ny safidy marina amin'ny famolavolana fitaovana synthetic dia tena zava-dehibe. Ny fitaovana syntetika mifototra amin'ny fingotra rehetra dia hiaina fitsaharana ara-pahasalamana. Mandritra ny fampiasana azy, noho ny fiovan'ny simika ao anatin'ny akora syntetika, dia hihena tsikelikely ny asan'ny famehezana voalohany, ary rehefa ambany ny faran'ny famehezana, farafaharatsiny, tsy azo ihodivirana ny famoahana.
Yantai Ishikawa Sealing Technology Co., Ltd. dia manampahaizana manokana amin'ny famokarana sy ny fiasan'ny takelaka famehezana isan-karazany, gasket vita amin'ny varingarina, gasket ary ampinga hafanana. Izy io dia ny lefitry ny filoha lefitry ny fikambanan'i China Friction and Sealing Materials Association ary ny singa mpitantana ny Conseil Engine diesel kely misy varingarina ao amin'ny Fikambanan'ny motera anatiny. Izy io dia iray amin'ireo orinasa an-trano lehibe indrindra manokan-tena amin'ny famokarana vokatra famehezana.